"ဆွမ်းကျိုးတုံ ့ပြန်၊ မြတ်မွေခံ၊ ရှုရန်မြတ်ဆရာ"
ဆွမ်းအလှူရှင်တွေရဲ ့ကျေးဇူးကို တရားနဲ့ကျေးဇူးဆပ်ရမှာ။
ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အကျင့်တွေကျင့်ပြီး ကျေးဇူး ဆပ်တာပဲ။
ဘုရားဟောလို့သာ အသိမှန်၊ အကျင့်မှန်တာ။
လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသေးသော မြစိမ်းတောင်ရိပ်သာ ဆွမ်းအခက်အခဲကို တဖက်တလမ်းမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီသည့်အနေဖြင့် “ ဆွမ်းပဒေသာပင် ” ထူထောင်ပြီး ထောက်ပံ့ရန် ယခုနှစ် ၂၀၁၇ စင်္ကာပူ တရားစခန်းအပြီးမှာ စတင် စီစဉ်လိုက်ပါသည်။ ဆွမ်းပဒေသာပင်အတွက် တစ်ဦးချင်း သီးသန့် ဆွမ်းတစ်နပ်စာ (သို့မဟုတ်) တစ်ရက်စာ လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ဘက်တွင် ဖော်ပြထားသော နှုန်းထားများအတိုင်း လှူဒါန်းနိုင်ကြသလို စုပေါင်း လှူဒါန်းလိုသူများ လည်း မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ငွေပမာဏ ဖြင့်လှူဒါန်းနိုင်ပြီး သင့်တော်ရာရက်များတွင် စုပေါင်းလှူဒါန်းပေးသွားပါမည်။
( ဥပမာ - တစ်နပ်စာ လှူဒါန်းလိုသူများအတွက် အာရုဏ်ဆွမ်းတနပ်စာ လှူဒါန်းလိုပါက ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အာရုဏ်ဆွမ်း လှူဒါန်းရန်အတွက် ဘဏ်တွင် ကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်းကို စာရင်းသေ အပ်နှံထားပြီး နှစ်စဉ်အတိုး ၁၀% မှ နှစ်စဉ် ၁သိန်းခွဲကို အာရုဏ်ဆွမ်းအတွက် အလှူရှင်များကိုယ်စား နှစ်စဉ် မိမိတို့ အလိုရှိရာရက်များ တွင် လှူဒါန်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ )
ဆွမ်းပဒေသာပင် တစ်နပ်စာ လှူဒါန်းလိုသူများသည်
၁) အာရုဏ်ဆွမ်း တနပ်စာအတွက် ၁၅သိန်းကျပ် (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့်ညီမျှသော စင်္ကာပူဒေါ်လာ
- ၁ နှစ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းလိုသူများအတွက် (S$135 x 12 months) ဖြစ်ပြီး
၂) နေ့ဆွမ်း တနပ်စာအတွက် ၂၅ သိန်းကျပ် (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့်ညီမျှသော စင်္ကာပူဒေါ်လာ
- ၁ နှစ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းလိုသူများအတွက် (S$220 x 12 months) ဖြစ်ပါတယ်။
၃) နေ့ခင်းဖျော်ရည်အတွက် ၅သိန်းကျပ် (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့်ညီမျှသော စင်္ကာပူဒေါ်လာ
- အရစ်ကျ ပေးသွင်းလိုသူများအတွက် (S$45 x 12 months) ဖြစ်ပါတယ်။
**တရက်စာလုံး (အာရုဏ်ဆွမ်း၊နေ့ဆွမ်း၊ဖျော်ရည်) လှူဒါန်းလိုသူများ ၂ နှစ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းလှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။**
ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး +65 9119 7361
မဖြူစင်ကျော် +65 9007 6620
မထက်ထက်နိုင် +65 9488 9752
ကိုဝင်းထွန်းဆင့် 09 770 731 716 (Yangon)
ဇော်မိုးစံ 09 444 555 234 (Yangon)
တို့အား ဆက်သွယ် မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတယ်။
လှူဒါန်း ရန် account:
ဆွမ်းပဒေသာပင်အတွက် အလိုရှိရာ ရက်များတွင် ဆွမ်းလှူဒါန်းထားကြသူများ စာရင်း
(လစ်လပ်သောရက်များနှင့် လစ်လပ်သော အာရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းနေရာများ တွင်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။)
Date အာရုံ နေ့ဆွမ်း ဖျော်ရည်
JAN 01 ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု
JAN 02 ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
JAN 03 ဒေါ်လှမြင့်သိန်း
JAN 04 မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်ခင်ခင် တို့အားအမှူးထား၍
မဝေဝေကျော် ၊ မစုခိုင်ကျော်၊မောင်ထူးလင်းပိုင်၊ မငုဝါကျော် မောင်နှမ တစ်စု ကောင်းမှု အောင်သူထက်၊နောင်သက်မွန်၊ထွန်းရာဇာ၊လမင်းအိ၊နေဇင်မာ၊နန်းဟေမာစိုး၊နှင်းသီရိ၊ဇင်သီတာရီ
JAN 05 ကိုမျိုးအောင်စန်း+မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မွေးနေ့အလှူ ကိုမျိုးအောင်စန်း+မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မွေးနေ့အလှူ ကိုမျိုးအောင်စန်း+မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မွေးနေ့အလှူ
JAN 07 မိခင်ဒေါ်ကျင်မြိုင်အားရည်စူး၍ မရီရီမြိုင် မွေးနေ့အလှူ
JAN 09 မိဘနှစ်ပါးရည် စူး၍ဒေါ်မော်လီကူး
JAN 13 ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် မှ ၇-ရက် သားသမီးများ ကောင်းမှူ့
JAN 25 ဦးနိုင်ဝင်း+‌ဒေါ်မိုးငယ်
JAN 17 ကွယ်လွန်သူ မိဘများနှင့် ဆွေမျိုများ အားရည်စူး၍ ဒေါ်သာဝရဉာဏီ
JAN 28 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်စိုး အားရည်စူး၍ ဦးသူရ + ဒေါ်ညွန့် ညွန့်ဝေ၊ ဦးသန်းဝင်း+ ဒေါ်တင်တင်အေး၊ ဦးကျော်သူဝင်း+ဒေါ်သင်းသင်းစိုး မိသားစု ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်စိုး အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စိန် မိသားစု
JAN 29 ကိုသိန်းထွန်းဦး + မအိအိခိုင်
JAN 30 ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ Dr. မြင့်မြင့်စန်း မိသားစု ရန်ကုန်
FEB 07 ကိုတင်ဇော်မျိုး(ခ)ကိုထောင်ကြီး + (ခ)နန်းလှိုင်လှိုင်ဌေး
FEB 09 ဦးမြင့်ဆွေ+ဒေါ်စန်းစန်းအေး မိသားစု ဦးသိန်းထွန်း+ ဒေါ်သန်းစိန် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်
FEB 10 ဦးမြင့်သိန်း + ဒေါ်ဝင်း မိသားစုကောင်းမူ
Feb 15 Tinzar
FEB 16 မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်အားအမှူးထား၍ သံဃာများ၊သီလရှင်များနှင့်ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများ မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်အားအမှူးထား၍ သံဃာများ၊သီလရှင်များနှင့်ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများ
FEB 18 နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုကျော်ရဲခေါင် + မယမင်းထိုက်သား မောင်ဘုဏ်းပြည့်ထွဋ်ခေါင်၊ သမီး မပြည့်စုံထွဋ်ခေါင် မိသားစု
FEB 22 ဒေါ်သီသီလှိုင် မွေးနေ့အလှူ
FEB 25 ဦးဥတရ အားအမှူးထား၍ ကို မျိုးကိုကိုစိုး+ မဖြိုးဖြိုးမင်း မိသားစု ရန်ကုန်
FEB 27 ဆွေဆွေယု မွေးနေ့အလှူ
FEB 28 ဦးတိတ် + ဒေါ်လေလီး မိသားစု
MAR 02 ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်
MAR 08 မဆွေဆွေမြင့်
ကို ဟိန်းဇော်ဇော် မွေးနေ့အလှူ
MAR 13 သင်းသင်းယု+ အေးအေးယု မွေးနေ့အလှူ
MAR 15 ဒေါ်လှသူဇာ
MAR 16 ကိုထွန်းလင်းအောင် + မယဉ်မျိုးအေး သား Ayden. Nathan.(USA) ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကြည် (ခ) ပေါက်ပေါက် ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်အား ရည်စူးအလှူ
MAR 19 မခင်ခင်မြတ်သူလှိုင်
MAR 21 မခင်စံပယ်
APR 01 ဦးသိန်းစိုး၊ ဒေါ်စိမ်းစိမ်း၊သမီး စုငြိမ်းချမ်း၊ ထက်ဝေစိုးမိသားစု။ ဦးသိန်းစိုး၏မွေးနေ့ အလှူ
APR 09 နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုဇော်မင်း + မမိုးမိုးခိုင် သား မောင်သူရဇော် သမီး မအေးချမ်းမြင့်မိုရ် မိသားစု၊ဝေါမြို့
APR 10 ကိုကျော်မင်းထွန်း + မနွယ်ဝါလွင် ဖြိုးနန္ဒာအေး မွေးနေ့
APR 14 မစိုး စန္ဒာမိသားစု မွေးနေ့အလှူ မစိုး စန္ဒာမိသားစု မွေးနေ့အလှူ မစိုး စန္ဒာမိသားစု မွေးနေ့အလှူ
APR 16 ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြိုင် မွေးနေ့အလှူ
APR 17 ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ဒေါ်ကြင်ခိုင် မိသားစု ၊လမ်းမတော်မြို့နယ် ရန်ကုန် မြို့မှ ဒေါ်ကြင်ခိုင်မွေးနေ့အလှူ
APR 21 မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ မတင်တင်ခိုင်မွေးနေ့အလှူ
APR 22 ဦးတင်ထွန်း+ဒေါ်သိင်္ဂီခင်မိသားစု
APR 23 ကိုမင်းသူရပို
APR 24 ဒေါ်ရီရီသန်း အားရည်စူး၍ ဦးကျော်လင်းနှင့် မိသားတစ်စု ကောင်းမှု ရန်ကုန် ဒေါ်အေး မွေးနေ့ကောင်းမှု ရန်ကုန် ကိုမင်းသူရပို
APR 26 (ဦးရဲမြင့်) ဒေါ်ရင်သိန်းအမှူးထားရျ် မရဲကြည်အောင် မောင်ရဲမြင့်အောင်
APR 25 ကိုမင်းသူရပို
APR 28 နှစ်ဘက်မိဘအမှူးထား၍ ဒေါက်တာစိန်ရီမင်းနှင့် မဝတ်ရည်ထိုက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ နှစ်ဘက်မိဘအမှူးထား၍ ဒေါက်တာစိန်ရီမင်းနှင့် မဝတ်ရည်ထိုက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ နှစ်ဘက်မိဘအမှူးထား၍ ဒေါက်တာစိန်ရီမင်းနှင့် မဝတ်ရည်ထိုက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ
APR 29 မဆွေဆွေဝင်း မွေးနေ့အလှူ မဆွေဆွေဝင်း မွေးနေ့အလှူ
MAY 01 Lotus Foundation နှစ်ပတ်လည်အလှူ
MAY 04 ဆရာတော် နှင့် မိဘများအား အမှုးထား၍ မချိုအေးလွင် မွေးနေ့အလှု ဆရာတော် နှင့် မိဘများအား အမှုးထား၍ မချိုအေးလွင် မွေးနေ့အလှု ဆရာတော် နှင့် မိဘများအား အမှုးထား၍ မချိုအေးလွင် မွေးနေ့အလှု
MAY 05 ကွယ်လွန်သူ မိဘများ ဦးစိန်ဝင်း ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် ကိုရည်စူး၍ သားအောင်ခိုင်မင်း ကျော်စိးုညွန့် မခိုင်ရည် မွန်
MAY 08 နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးအောင်ကျော်ဦး + ဒေါ် ခင်အးစံသမီး မသိမ့်ဟန်သွယ် ရန်ကုန်
MAY 09 မိခင် ဒေါ်ခင်မြ မွေးနေ့အလှူ
MAY 10 ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဘက်မိဘများအားအမှူးထားရွဲ့ကိုဇာနည်စိုး+မဇာခြည်သိမ့်သိမ့်သားသမီးမြေး တစ်စုကောင်းမှု
MAY 12 ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူး၍ ‌ဒေါ်တင်တင် မွေးနေ့ အလှူ
MAY 18 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးဘိုရွှေ အသက်(၈၉)အားရည်စူး၍ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုးကျော်+ပါမောက္ခ Dr သန်းသန်ထိုက် မိသားစု ရန်ကုန်
MAY 23 ဦးစန်းမွှေး + ဒေါ်သန်းကြည် အာအမှူးထား၍ သားသမီးများ ရန်ကုန်
MAY 24 မမေရီဆု
MAY 25 မိဘနှစ်ပါးအား ဦးထိပ်ထား၍ ဒေါ်နှင်းလှ မွေးနေ့အလှူ ဆင်နှစ်ကောင်မုန့်တိုက် သာယာဝတီ
MAY 29 ကိုအောင်မြတ်ဦး (Paradise Co-)
MAY 31 မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးဝင်းနိုင် ဒေါ်စွဲ့လန်းခိုင်
JUN 01 ကျေးဇူ့ရှင် ဖခင် ဦးခင်ညွန့်(ခေါ်) ဦးတိုင်း မိခင် ဒေါ်ကျင်မြင့်
ဲJUN 04 မိဘနှစ်ပါးကို အမှူးထား၍ မခိုင်ခိုင်ထွန်း မွေးနေ့အလှူ မိဘနှစ်ပါးကို အမှူးထား၍ မခိုင်ခိုင်ထွန်း မွေးနေ့အလှူ
ဖိုးဖိုးကြီး ဦးသန့်ဇင် + မေကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည် အားရည်စူး၍ ကိုနေမင်းထွန်း+ မကျော့ကျော့ဆွေ သမီး ဆိုဖီယာကျော့ထွန်း သားဟင်နရီ မင်းထွန်း
JUN 11 (ဦးရဲမြင့်) ဒေါ်ရင်သိန်းအမှူးထားရျ် မရဲကြည်အောင် ၊မောင်ရဲမြင့်အောင်၊ မရဲမေအောင်
JUN 14 ဖခင် ဦးကျော်ဝင်းတင့် မွေးနေ့အား ရည်စူး၍ သမီး မနွေစင်ကျော်၊မဖြူစင်ကျော်
ဲJUN 20 မိခင်ကြီးဒေါ်မေရီအားအမှူးထား၍ ခင်ခင်လေးမွေးနေ့ကောင်းမှှု။
JUN 29 ဒေါ်ဌေးဌေးရီ နှင့် ထက်နိုင်လင်းမွေးနေ့အလှူ
JUL2နေ့ဆွမ်း နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးအောင်ကျော်ဦး+ဒေါ်ခင်အေးစံ သမီး မသိမ့်ဟန်သွယ် ရန်ကုန်
JUL 04 Stanley Lu Eng Ho @ ကိုမောင်မောင်အေး မွေးနေ့အလှူ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစံတင်အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရင်မေနှင့် ဦးဇော်မိုးစံ+ ဒေါ်သန်းသန်းဌေး သမီး စုသီရိစံ (ဟုန်ဟုန်) မိသားစု
JUL 12 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့် အားရည်စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ဒေါ်မြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia ကောင်းမှု ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့် အားရည်စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ဒေါ်မြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia ကောင်းမှု
JUL 15 ဦးသက်ဝင်း + ဒေါ်မြဝင်းရွှေ
JUL 17 ကိုဇင်အောင်
JUL 19 ဦးခင်ဇော်၊ဒေါ်ကျင်လှ၊ ဦးစန်းဌေး မိသားစု ဆရာမ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေး ၊ဒေါ်မိအောင် ၊ဒေါ် မိထူး ၊ဦးတင့်ခိုင်၊ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း ဦးခင်ဇော်၊ဒေါ်ကျင်လှ၊ ဦးစန်းဌေး မိသားစု ဆရာမ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေး ၊ဒေါ်မိအောင် ၊ဒေါ် မိထူး ၊ဦးတင့်ခိုင်၊ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း
JUL 23 မိအေးအေးချိန် နှစ်ဘက်သော ဘိုး ဘွား မိဘများအား ရည်စူး၍ မောင်မြင့်သိန်း +မစီစီလေး သားမောင်ဘုန်းကို + မဧဧမော် ၊မောင်ဇင်အောင်၊မောင်ရန်ပိုင် မြေး Willa lin, Nora Lim တို့၏ကောင်းမှူ့ နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်
JUL 25 ဦးလုံးစိန် နှင့် မချိုချိုယု မွေးနေ့ အလှူ
JUL 26 ကိုခင်မောင်စိုး + မမိုးပပသင်း သားဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် မိသားစု
JUL 28 နှစ်ဘက်မိဘများအမှုးထား၍ ကိုသန်းထိုက် + မသင်းယုဆွေ သား မောင်ဟိန်းထက်အောင် မိသားစု
JUL 29 (ဦးလီရှောင်ဖု) + ဒေါ်ရှီပင်းဖွမ် သမီး ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်@ အားကျွမ်း (ဦးလီရှောင်ဖု) + ဒေါ်ရှီပင်းဖွမ် သမီး ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်@ အားကျွမ်း (ဦးလီရှောင်ဖု) + ဒေါ်ရှီပင်းဖွမ် သမီး ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်@ အားကျွမ်း
AUG 03 မလင်းလင်းချစ်
AUG 04 ဒေါ်တင်တင်ရီ မွေးနေ့အလှူ
AUG 06 ကိုဖြိုးတင်သန်း မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး ကိုဖြိုးတင်သန်း မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး ကိုဖြိုးတင်သန်း မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး
AUG 08 ကိုကျော်သီဟ မွေးနေ့အလှူ
AUG 15 နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်ကြသော Dr ဦးသာလွင်+ဒေါ်ခင်မေအေး ( ဦးစီယုံ)+(ဒေါ်မြ) တို့အား အမှူးထားရည်စူး၍ ဦးဇော်မင်းလွင်+ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ( သား) မောင်ဇေယျာမင်းလွင် မိသားစု မှ ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ၏ မွေးနေ့ အလှူတော် ခေတ်ဦး အပေါင်ဆိုင် ၊ တိုက်ကြီး
AUG 23 မဝါဝါပြုံး မွေးနေ့ အလှူ
AUG 17 ဒေါ်မြသီ မွေးနေ့အလှူ
AUG 18 ကွယ်လွန်သွားကြသော မိဘဘိုးဘွားများအားရည်စူး၍ မခင်လေးမွန်
AUG 21 မဟန်နီမြင့် မဟန်နီမြင့် မဟန်နီမြင့်
AUG 26 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးဒေါက်တာ ဦးမြသိန်း အားရညိစူး၍ ဒေါ်လှသိန်း မိသားစု (စမ်းချောင်း ရန်ကုန်)
AUG 28 မိဘဆွေမျိုး ကျေးဇူ့ရှင်များနှင့် ဦးထွန်းကျော် + မြင့်မြင့်စန်း မိသားစု ရန်ကုန်
SEP 05 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်ဝင်း အား ရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်ဝေဝေနှင့်ကျန် ရစ်သူ သား သမီး မြေး မိသားစု ကောင်းမှူ့
SEP 07 မိဘ ဆရာသမားများအားအမှုးထားရျ်
ဇေယျာအောင် မညွန့်ရီမိသားစု (ဇေယျာအောင် မွေးနေ့အလှူ)
SEP 10 ဖခင် ဦးခင်ညွန့်(ခ) ဦိ'တိုင်း+မိခင် ဒေါ်ကျင်မြင့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးကောင်းမှု
SEP 12 ကိုစိုးမြင့်ထွန်း+မအိသက်ခိုင် သားမောင်ခန့်ဇွဲသာ မိသားစု တိုက်ကြီး ကိုစိုးမြင့်ထွန်း+မအိသက်ခိုင် သားမောင်ခန့်ဇွဲသာ မိသားစု တိုက်ကြီး ကိုစိုးမြင့်ထွန်း+မအိသက်ခိုင် သားမောင်ခန့်ဇွဲသာ မိသားစု တိုက်ကြီး
SEP 15 ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင် မွေးနေ့အလှူ
SEP 18 နှစ်ဘက်မိဘများအား ရည်စူးအမှူးထား၍ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်+ဒေါ်ခင်စန်းမြင့် သား ကိုထိုက်+မဝင်းလဲ့ဖြိုး၊ ကိုလွမ်း၊ကိုဇေ
' ပြည့်ဖြိုးပိုင်၊ပြည့်ဝ " ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး မိသားစု မန္တလေးမြို့
SEP 19 မိခင်ကြီး ဒေါ ်မြင့်ကြည်အား အမှူးထား၍ သမီး မဌေးဌေးရှိန်+ Mr Kenny မဌေးဌေးရှိန် မွေးနေ့အလှူ
SEP 22 ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင် ှဒေါ်ခင်သိန်းတင့်(ဒေါ်ကေတီ)အားရည်စူး၍ ဦးထိန်လင်းအောင်+ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ညွန့် - မချမ်းမြေ့ခင်-မောင်အောင်ကောင်းပြည့်-မောင်အောင်ခန့်ပြည့်
SEP 23 ကိုစိုးမြင့်ထွန်း + မအိသက်ခိုင် ကိုစိုးမြင့်ထွန်း + မအိသက်ခိုင်
SEP 26 ဦးမြသန်း + ဒေါ်လေးလေးခင် သမီး သင်းသီရိနိုင်၊ မြင့်မြတ်သူ မိသားစု ဦးမြသန်း မွေးနေ့အလှူ
SEPT 27 ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်းကျင်အားရည်စူး၍ ဦးတင်အောင် သမီး ဒေါ်ြမသောင်း သားသမီးမြေး မိသားစု ကောင်းမှု
SEPT 28 ကိုစိုးမြင့်ထွန်း+မအိသက်ခိုင် သား မောင်ဇွဲခန့်သာ (တိုက်ကြီး) ကိုကျော်မင်းထွန်း+မနွယ်ဝါလွင် မိသားစု
SEP 29 ဦးတင်ဦး+ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ သမီး မအိသန္တာဦး
SEP 30်Wang Huei Man & Chen Mei Chu
OCT 05 နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးစိုး၀◌င်း+ဒေါ်ခင်နှင်းရီ သား မောင်မျိုးသီဟကျော် မိသားစုမှ ဒေါ်ခင်နှင်းရီ ၏ မွေးနေ့အလှူတော်
OCT 06 မငြိမ်းဌေးစံ မွှေးနေ့အလှု
OCT 10 ဦးသန်းဝင်းမိသားစု ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ခင်စော၀င်း(ခ)မတူးအားရည်စူး၍ ဦးကျော်ြမင့်မိသားစု (တိုက်ကြီး)
OCT 13 မခင်သက်သက်ငြိမ်း
OCT 16 ဦးမောင်နွဲ့+ဒေါ်ရီရီဝင်း သား-ကျော်စည်သူ ကောင်းမှု
OCT 18 ဦးသန့်ဇင်အောင်+ဒေါ်ပိုးဇာခြည်စိုးတင့် (သမီး) မအိမ့်မှူးမေ/မမြတ်မှူးသော်
OCT 20 နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ Drတင်ဇော်လင်း+ မနှင်းဝေ‌ဝေ‌ဖြိုး
OCT 21 မအေးစုလှိုင် ကိုကျော်လင်းအောင် မမေသူလွင် သား ဘုန်မြတ်သူရကျော် မိသားစုမှ ကိုကျော်လင်းအောင်၏ မွေးနေ့အလှူ
OCT 22 ဒေါက်တာဦးမျိုးမင်း မွေးနေ့အလှူ
OCT 25 ဦးအောင်သွင်မင်း+ဒေါ်ဆွေလင်းမှု
OCT 30 မိခင်ဒေါ်လှရင်အားအမှူးထား၍ သားသမီး မြေးတစုကောင်းမှူ့
NOV 04 မိခင်ဒေါ်ဆယ်အားအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်မာဌေး မိခင်ကြီးဒေါ်မြမြသန်း ကိုအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဌေး နှင့်ညီအမ များကောင်းမှူ့ မိခင်ကြီးဒေါ်မြမြသန်း ကိုအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဌေး နှင့်ညီအမ များကောင်းမှူ့
NOV 08 ကိုထွန်းထွန်း+မနီနီအောင်
NOV 13 ဒေါ်အေးနွယ် မွေးနေ့အလှူ
NOV 16 ကိုချစ်ကိုကို+မဇာခြည်ဦး (သား) ဟိန်းထက်ဖြိုး၊ဟိန်းသန့်ညီ
NOV 17 ဒေါ်ပုတ် (၈၇) နှစ် ပြည်အလှူ
NOV 19 ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ဦး(ငြိမ်း)+ဒေါ်ရီရီဝင်း သမီးဆုနှင်းထက်-သားမောင်ရှင်းခန့် မိသားစု မိခင်ကြီး ဒေါ်ဝေဝေအားအမှူးထား၍ သား သမီး မြေး မိသားစု ကောင်းမှူ့
NOV 20 ဦးခင်ဇော်+ဒေါ်နီနီတင်အုန်း
NOV 21 နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်ကြသော Drဦးသာလွင်+ဒေါ်ခင်မေအေး ( ဦးစီယုံ)+(ဒေါ်မြ) တို့အား အမှူးထားရည်စူး၍ ဦးဇော်မင်းလွင်+ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ( သား) မောင်ဇေယျာမင်းလွင် မိသားစု မှ ဦးဇော်မင်းလွင် ၏ မွေးနေ့ အလှူတော် ခေတ်ဦး အပေါင်ဆိုင် ၊ တိုက်ကြီး
NOV 22 ဒေါ်ခင်ဌေး မွေးနေ့အလှူ ဒေါ်ချိုနွယ်ဦး မွေးနေ့အလှူ
NOV 24 ကွယ်လွန်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ကိုရည်စူးရျ် ဦးကျော်ဝင်း နှင့်သမီးမထက်ထက် မိသားစု
NOV 26 ကိုပြည့်ဖြိုးမောင် မသန္တာလွင် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ
NOV 27 ဦးအောင်ကျော်မိုး + ဒေါ်သီသီဟန် ဦးအောင်ကျော်မိုး + ဒေါ်သီသီဟန်
NOV 29 ဦးသောင်းထိုက်+ဒေါ်စိန်ရီ
NOV 30 ကိုတင်မောင်စန်း+ မမြတ်သူဇာအောင် မဇာဇာအောင်
DEC 01 ဦးချမ်းသာ +ဒေါ် သက်ဝင်း သမီး မသီရိ ပြည်စုံချမ်းသာ (ခ) မသဒါ္ဓ သွန်းဖြိုး
DEC 02 မထိုက်ဝေလင်း capt.daniel မထိုက်ဝေလင်း
DEC 05 ကွယ်လွန်သူ မိဘများအားရည်စူး ၍ ဆက်ဆက်ကျော်လူ
DEC 06 မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်နှင့်ဦးဣန္ဒာစာရအား အမှူးထား၍ ဒေါ်ညွန့်စိန် သမီး မပဏ္ဍိတာ မဇဝနဉာဏီ မသစ္စသိဂိႍ ၤနှင့်မောင်နှမများ
DEC 09 နော်ကြည်ကြည်ဝင်း
DEC 10 နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှူးထား၍ စက်ရုံမှူး ဦးနိုင်လင်း+မယုယုခိုင် မိသားစု
DEC 11 ဦးမြင့်အောင်+ဒေါ်တင်၀င်း မိသားစု (မြောင်းတကာ) ဦးဇော်မင်းစိုး+ဒေါ်လွင်မာအောင် သား ကောင်းသူရဇော်၊ရှိုင်း၀ဏ္ဏဇော်(မြောင်းတကာ)
DEC 14 ဦးတိုးလွင်+ဒေါ်ကေသီခိုင်
DEC 23 ဦးဇော်မြင့်+ဒေါ်အေးအေးမြင့်သမီး မအေးချမ်းမြတ်၊ မဆုပန်ထက ်မိသားစု
DEC 25 မချောစုလွင်
DEC 26 ကွယ်လွန်သူ မိဘများ ဖြစ်သော ဦးတင်နွယ် နှင့် ဒေါ် ်ခင်သိန်း ကို ရည်စူး၍ ဒေါက်တာ မြစိုးနွယ်
DEC 30 မမေမီမွန် မွေးနေ့အလှူ
DEC 31 အိအိခိုင်
စုပေါင်း လှူဒါန်းထားသော ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင် စာရင်း
ကိုမျိုးဝင်းရီး + မရည်မွန်သော် သမီး မေနံနက်ခင်း သားငယ် တူးတူးမိသားစု ကောင်းမှူ့
စဉ် အလှူရှင်အမည် လှူဒါန်းသည့်ရက် July Aug Total
ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု 01 Jan(အာရုံ) 1620
ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး 02 Jan(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း ၊ဖျော်ရည်) 4800
ဒေါ်လှမြင့်သိန်း 03 Jan(အာရုံ) 15သိန်း
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်ခင်ခင် တို့အားအမှူးထား၍
မဝေဝေကျော် ၊ မစုခိုင်ကျော်၊မောင်ထူးလင်းပိုင်၊ မငုဝါကျော် မောင်နှမ တစ်စု ကောင်းမှု 04 Jan(အာရုံ) 15သိန်း
5 ကိုမျိုးအောင်စန်း+မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ မွေးနေ့အလှူ 05 Jan(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း ၊ဖျော်ရည်) 45သိန်း
6 မိခင်ဒေါ်ကျင်မြိုင်အားရည်စူး၍ မရီရီမြိုင် မွေးနေ့အလှူ 07 Jan(အာရုံ) 1485
7 ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် မှ ၇-ရက် သားသမီးများ ကောင်းမှူ့ 13 Jan(အာရုံ) 15သိန်း
8 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်စိုး အားရည်စူး၍ ဦးသူရ+ဒေါ်ညွန့် ညွန့်ေ၀ ၊ဦးသန်းဝင်း+ဒေါ်တင်တင်အေး၊ဦးကျော်သူဝင်း+ဒေါ်သင်းသင်းစိုး မိသားစု 28 Jan(အာရုံ) 2045
ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်စိုး အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စိန် မိသားစု 28 Jan(ဖျော်ရည်)
ကိုသိန်းထွန်းဦး + မအိအိခိုင်သမီးဆုစန္ဒီဦး မိသားစု 29 Jan(အာရုံ) 1508
11 ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ Dr. မြင့်မြင့်စန်း မိသားစု ရန်ကုန် 30 Jan(အာရုံ) 10သိန်း
ကိုတင်ဇော်မျိုး(ခ)ကိုထောင်ကြီး+(ခ)နန်းလှိုင်လှိုင်ဌေး 07 Feb(အာရုံ) 15သိန်း
ဦးမြင့်ဆွေ+ဒေါ်စန်းစန်းအေး မိသားစု 09 Feb(အာရုံ) 1500
3 ဦးသိန်းထွန်း+ ဒေါ်သန်းစိန် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် 09 Feb(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
ဦးမြင့်သိန်း + ဒေါ်ဝင်း မိသားစုကောင်းမူ 10 Feb(အာရုံ) 1493.5
5 Tin zar 15 Feb(နေ့ဆွမ်း) 22သိန်း
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်အားအမှူးထား၍ သံဃာများ၊သီလရှင်များနှင့်ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများ 16 Feb(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုကျော်ရဲခေါင် + မယမင်းထိုက်သား မောင်ဘုဏ်းပြည့်ထွဋ်ခေါင်၊ သမီး မပြည့်စုံထွဋ်ခေါင် မိသားစု 18 Feb(နေ့ဆွမ်း) 2509
8 ဒေါ်သီသီလှိုင် 22 Feb(နေ့ဆွမ်း) 2820
9 ဦးဥတရ အားအမှူးထား၍ ကို မျိုးကိုကိုစိုး+ မဖြိုးဖြိုးမင်း မိသားစု ရန်ကုန် 25 Feb(အာရုံ) 15သိန်း
ဆွေဆွေယု မွေးနေ့အလှူ 27 Feb(အာရုံ) 1620
ဦးတိတ် + ဒေါ်လေလီး မိသားစု 28 Feb(အာရုံ) 15သိန်း
မဆွေဆွေမြင့် 8 Mar(အာရုံ) 15သိန်း
2 ကို ဟိန်းဇော်ဇော် မွေးနေ့အလှူ 11 Mar(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း ၊ဖျော်ရည်) 4900
သင်းသင်းယု+ အေးအေးယု မွေးနေ့အလှူ 13 Mar(အာရုံ) 1620
ဒေါ်လှသူဇာ 15 Mar(အာရုံ) 5သိန်း
ကိုထွန်းလင်းအောင် + မယဉ်မျိုးအေး သား Ayden. Nathan.(USA) 16 Mar(အာရုံ) 15သိန်း
ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကြည် (ခ) ပေါက်ပေါက် မွေးနေ့အလှူ 16 Mar (နေ့ဆွမ်း) 25 သိန်း
မခင်စံပယ် 21 Mar(အာရုံ) 15သိန်း
ဦးသိန်းစိုး၊ ဒေါ်စိမ်းစိမ်း၊သမီး စုငြိမ်းချမ်း၊ ထက်ဝေစိုးမိသားစု။ ဦးသိန်းစိုး၏မွေးနေ့ အလှူ 01 Apr(နေ့ဆွမ်း) 2528
နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုဇော်မင်း + မမိုးမိုးခိုင် သား မောင်သူရဇော် သမီး မအေးချမ်းမြင့်မိုရ် မိသားစု၊ဝေါမြို့ 09 APR(အာရုံ) 15သိန်း
3 ကိုကျော်မင်းထွန်း + မနွယ်ဝါလွင် 10 APR(အာရုံ) 1620
ဖြိုးနန္ဒာအေး မွေးနေ့ 10 Apr (ဖျော်ရည်) 540
ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြိုင် မွေးနေ့အလှူ 16 Apr(နေ့ဆွမ်း) 1620
ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု 17 Apr(အာရုံ) 1620
ဒေါ်ကြင်ခိုင် မိသားစု ၊လမ်းမတော်မြို့နယ် ရန်ကုန် မြို့မှ ဒေါ်ကြင်ခိုင်မွေးနေ့အလှူ 17 Apr(နေ့ဆွမ်း) 2640
မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ မတင်တင်ခိုင်မွေးနေ့အလှူ 21 Apr(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
ဦးတင်ထွန်း+ဒေါ်သိင်္ဂီခင်မိသားစု 22 Apr(အာရုံ) 1650
10 ကိုမင်းသူရပို 23 APR (ဖျော်ရည်) 5သိန်း
ဒေါ်ရီရီသန်း အားရည်စူး၍ ဦးကျော်လင်းနှင့် မိသားတစ်စု ကောင်းမှု ရန်ကုန် 24 APR(အာရုံ) 15သိန်း
ဒေါ်အေး မွေးနေ့ကောင်းမှု ရန်ကုန် 24 APR(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
13 ကိုမင်းသူရပို 24 APR (ဖျော်ရည်) 500
14 မဆွေဆွေဝင်း မွေးနေ့အလှူ 29 APR(အာရုံ) 1620
မဆွေဆွေဝင်း မွေးနေ့အလှူ 29 APR (ဖျော်ရည်) 5သိန်း
Lotus Foundation နှစ်ပတ်လည်အလှူ 01 May(အာရုံ) 15သိန်း
2 ဆရာတော် နှင့် မိဘများအား အမှုးထား၍ မချိုအေးလွင် မွေးနေ့အလှု 04 May(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း ၊ဖျော်ရည်) 4500
3 ကွယ်လွန်သူ မိဘများ ဦးစိန်ဝင်း ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် ကိုရည်စူး၍ သားအောင်ခိုင်မင်း ကျော်စိးုညွန့် 05 May 2640
4 နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးအောင်ကျော်ဦး + ဒေါ် ခင်အးစံသမီး မသိမ့်ဟန်သွယ် ရန်ကုန် 08 May (နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
မိခင် ဒေါ်ခင်မြ မွေးနေ့အလှူ 09 May(အာရုံ) 1620
ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဘက်မိဘများအားအမှူးထား၍့ကိုဇာနည်စိုး+မဇာခြည်သိမ့်သိမ့်သားသမီးမြေးတစ်စုကောင်းမှု 10 May(အာရုံ) 1620
7 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးဘိုရွှေ အသက်(၈၉)အားရည်စူး၍ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုးကျော်+ပါမောက္ခ Dr သန်းသန်ထိုက် မိသားစု ရန်ကုန် 18 May(နေ့ဆွမ်း 25သိန်း
ဦးစန်းမွှေး + ဒေါ်သန်းကြည် အာအမှူးထား၍ သားသမီးများ ရန်ကုန် 23 May(နေ့ဆွမ်း 25သိန်း
မမေရီဆု 24 May(အာရုံ) 15သိန်း
10 မိဘနှစ်ပါးအား ဦးထိပ်ထား၍ ဒေါ်နှင်းလှ မွေးနေ့အလှူ ဆင်နှစ်ကောင်မုန့်တိုက် သာယာဝတီ 25 May (နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
11 ကိုအောင်မြတ်ဦး (Paradise Co-) 29 May (နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးဝင်းနိုင် ဒေါ်စွဲ့လန်းခိုင် ၃၁ May(နေ့ဆွမ်း) 2760
1 မိဘနှစ်ပါးကို အမှူးထား၍ မခိုင်ခိုင်ထွန်း မွေးနေ့အလှူ 04 Jun(အာရုံ) 1419.53
2 ကိုနေမင်းထွန်း+ မကျော့ကျော့ဆွေ 05 Jun(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း၊ဖျော်ရည်) 45သိန်း
(ဦးရဲမြင့်) ဒေါ်ရင်သိန်းအမှူးထားရျ် မရဲကြည်အောင် ၊မောင်ရဲမြင့်အောင်၊ မရဲမေအောင် 11 Jun(အာရုံ) 15သိန်း
ဖခင် ဦးကျော်ဝင်းတင့် မွေးနေ့အား ရည်စူး၍ သမီး မနွေစင်ကျော်၊မဖြူစင်ကျော် 14 Jun(အာရုံ) 15သိန်း
မိခင်ကြီးဒေါ်မေရီအားအမှူးထား၍ ခင်ခင်လေးမွေးနေ့ကောင်းမှှု။ 20 Jun (ဖျော်ရည်) 500
ဒေါ်ဌေးဌေးရီ နှင့် ထက်နိုင်လင်းမွေးနေ့အလှူ 29 Jun(အာရုံ) 1620
1 နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးအောင်ကျော်ဦး+ဒေါ်ခင်အေးစံ သမီး မသိမ့်ဟန်သွယ် ရန်ကုန် 02 Jul(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
2 Stanley Lu Eng Ho @ ကိုမောင်မောင်အေး မွေးနေ့အလှူ 04 Jul(အာရုံ) 1500
3 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစံတင်အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရင်မေနှင့် ဦးဇော်မိုးစံ+ ဒေါ်သန်းသန်းဌေး သမီး စုသီရိစံ (ဟုန်ဟုန်) မိသားစု 04 Jul(နေ့ဆွမ်း) 25 သိန်း
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့် အားရည်စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ဒေါ်မြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia ကောင်းမှု 12 Jul(အာရုံ) 1510
5 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့် အားရည်စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ဒေါ်မြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia ကောင်းမှု 12 Jul(နေ့ဆွမ်း) 2260
6 ဦးသက်ဝင်း + ဒေါ်မြဝင်းရွှေ 15 Jul(အာရုံ) 15သိန်း
ကိုဇင်အောင် 17 Jul(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
8 ဦးခင်ဇော်၊ဒေါ်ကျင်လှ၊ ဦးစန်းဌေး မိသားစု ဆရာမ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေး ၊ဒေါ်မိအောင် ၊ဒေါ် မိထူး ၊ဦးတင့်ခိုင်၊ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း 19 Jul(အာရုံ နေ့ဆွမ်း)
မိအေးအေးချိန် 23 July(အာရုံ) 1620
ဦးလုံးစိန် နှင့် မချိုချိုယု မွေးနေ့ အလှူ 25 Jul(အာရုံ) 1620
ကိုခင်မောင်စိုး + မမိုးပပသင်း သားဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် မိသားစု 26 July(နေ့ဆွမ်း) 2531
နှစ်ဘက်မိဘများအမှုးထား၍ ကိုသန်းထိုက်+မသင်းယုဆွေ သား မောင်ဟိန်းထက်အောင်မိသားစု 28 Jul(အာရုံ) 1620
13 (ဦးလီရှောင်ဖု) + ဒေါ်ရှီပင်းဖွမ် သမီး ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်@ အားကျွမ်း 29 Jul(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း၊ဖျော်ရည်) 45သိန်း
ဒေါ်တင်တင်ရီ မွေးနေ့အလှူ 04 Aug(အာရုံ) 1516.5
06 Aug (အာရုံ) 15သိန်း
ကိုဖြိုးတင်သန်း မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး 06 Aug(နေ့ဆွမ်း ၊ဖျော်ရည်) 3031
ကိုကျော်သီဟ မွေးနေ့အလှူ 08 Aug(ဖျော်ရည်) 503
နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်ကြသော Dr ဦးသာလွင်+ဒေါ်ခင်မေအေး ( ဦးစီယုံ)+(ဒေါ်မြ) တို့အား အမှူးထားရည်စူး၍ ဦးဇော်မင်းလွင်+ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ( သား) မောင်ဇေယျာမင်းလွင် မိသားစု မှ ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ၏ မွေးနေ့ အလှူတော် ခေတ်ဦး အပေါင်ဆိုင် ၊ တိုက်ကြီး 15 Aug(နေ့ဆွမ်း) 25 သိန်း
ဒေါ်မြသီ မွေးနေ့အလှူ 17 Aug(အာရုံ) 1513
ကွယ်လွန်သွားကြသော မိဘဘိုးဘွားများအားရည်စူး၍ မခင်လေးမွန် 18 Aug(အာရုံ)) ၁၅ သိန်း+ ၁ သိန်းခွဲ
မဟန်နီမြင့် 21 Aug(အာရုံ၊ နေ့ဆွမ်း၊ဖျော်ရည်) 2640 20သိန်း
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးဒေါက်တာ ဦးမြသိန်း အားရညိစူး၍ ဒေါ်လှသိန်း မိသားစု (စမ်းချောင်း ရန်ကုန်) 26 Aug(အာရုံ) 15သိန်း
မိဘဆွေမျိုး ကျေးဇူ့ရှင်များနှင့် ဦးထွန်းကျော် + မြင့်မြင့်စန်း မိသားစု ရန်ကုန် 18 Aug(အာရုံ) 4သိန်း
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်ဝင်း အား ရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်ဝေဝေနှင့်ကျန် ရစ်သူ သား သမီး မြေး မိသားစု ကောင်းမှူ့ 05 Sep (နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
ဇေယျာအောင် မညွန့်ရီမိသားစု (ဇေယျာအောင် မွေးနေ့အလှူ) 07 SEP(အာရုံ) 200 200 1600
ဖခင် ဦးခင်ညွန့်(ခ) ဦိ'တိုင်း+မိခင် ဒေါ်ကျင်မြင့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးကောင်းမှ 10 SEP(အာရုံ) ၁၅ သိန်း
ဖခင် ဦးခင်ညွန့်(ခ) ဦိ'တိုင်း+မိခင် ဒေါ်ကျင်မြင့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးကောင်းမှ
ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင် မွေးနေ့အလှူ 15 SEP(အာရုံ) 1500
မိခင်ကြီး ဒေါ ်မြင့်ကြည်အား အမှူးထား၍ သမီး မဌေးဌေးရှိန်+ Mr Kenny မဌေးဌေးရှိန် မွေးနေ့အလှူ 19 SEP (အာရုံ) 1510
ဦးမြသန်း + ဒေါ်လေးလေးခင် သမီး သင်းသီရိနိုင်၊ မြင့်မြတ်သူ မိသားစု 26 SEP(အာရုံ) 1500
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင် 22 Sep(အာရုံ) 1620
ှဒေါ်ခင်သိန်းတင့်(ဒေါ်ကေတီ)အားရည်စူး၍ ဦးထိန်လင်းအောင်+ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ညွန့် - မချမ်းမြေ့ခင် -မောင်အောင်ကောင်းပြည့်-မောင်အောင်ခန့်ပြည့် 22 Sep(ဖျော်ရည်) 5သိန်း
ကိုကျော်မင်းထွန်း + မနွယ်ဝါလွင် 28 Sep(ဖျော်ရည်) 540
Wang Huei Man & Chen Mei Chu 30 Sept(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးစိုး၀◌င်း+ဒေါ်ခင်နှင်းရီ သား မောင်မျိုးသီဟကျော် မိသားစုမှ ဒေါ်ခင်နှင်းရီ ၏ မွေးနေ့အလှူတော်5Oct(အာရုံ) 15 သိန်း
မငြိမ်းဌေးစံ မွှေးနေ့အလှု 06 Oct(အာရုံ) 1518.5
ဦးသန်းဝင်းမိသားစု 10 OCT (အာရုံ) 1510
မခင်သက်သက်ငြိမ်း 31 Oct(အာရုံ) 1620
ဦးမောင်နွဲ့+ဒေါ်ရီရီဝင်း သား-ကျော်စည်သူ ကောင်းမှု 16 Oct(အာရုံ) 1620
5 မအေးစုလှိုင် 21 Oct(အာရုံ) 15သိန်း
ကိုကျော်လင်းအောင် မမေသူလွင် သား ဘုန်မြတ်သူရကျော် မိသားစုမှ ကိုကျော်လင်းအောင်၏ မွေးနေ့အလှူ 21 Oct(နေ့ဆွမ်း) 2640
မိခင်ဒေါ်လှရင်အားအမှူးထား၍ သားသမီး မြေးတစုကောင်းမှူ့ 30 Oct(အာရုံ) 15သိန်း
မိခင်ဒေါ်ဆယ်အားအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်မာဌေး4Nov(အာရုံ) 15သိန်း
2 မိခင်ကြီးဒေါ်မြမြသန်း ကိုအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဌေး နှင့်ညီအမ များကောင်းမှူ့4Nov (နေ့ဆွမ်း ဖျော်ရည်) 30သိန်း
ကိုချစ်ကိုကို+မဇာခြည်ဦး (သား) ဟိန်းထက်ဖြိုး၊ဟိန်းသန့်ညီ 16 Nov (ဖျော်ရည်) 500
ဒေါ်ပုတ် (၈၇) နှစ် ပြည်အလှူ 17 Nov(အာရုံ) 15သိန်း
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ဦး(ငြိမ်း)+ဒေါ်ရီရီဝင်း သမီးဆုနှင်းထက်-သားမောင်ရှင်းခန့် မိသားစု 19 Nov (အာရုံ) 15သိန်း
မိခင်ကြီး ဒေါ်ဝေဝေအားအမှူးထား၍ သား သမီး မြေး မိသားစု ကောင်းမှူ့ 19 Nov (နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
ဦးခင်ဇော်+ဒေါ်နီနီတင်အုန်း 20 Nov(အာရုံ) 1530
နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်ကြသော Drဦးသာလွင်+ဒေါ်ခင်မေအေး ( ဦးစီယုံ)+(ဒေါ်မြ) တို့အား အမှူးထားရည်စူး၍ ဦးဇော်မင်းလွင်+ဒေါ်မြမြ၀◌င်း ( သား) မောင်ဇေယျာမင်းလွင် မိသားစု မှ ဦးဇော်မင်းလွင် ၏ မွေးနေ့ အလှူတော် ခေတ်ဦး အပေါင်ဆိုင် ၊ တိုက်ကြီး 21 Nov(ဖျော်ရည်)5သိန်း
ဦးကျော်ဝင်း နှင့်သမီးမထက်ထက် မိသားစု 24 Nov(အာရုံ) 1357.5
9 ကိုပြည့်ဖြိုးမောင် မသန္တာလွင် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ 26 Nov(အာရုံ နေ့ဆွမ်း ) 4သိန်း
10 ဦးအောင်ကျော်မိုး + ဒေါ်သီသီဟန် 27 Nov(အာရုံ နေ့ဆွမ်း ) 40သိန်း
10 ဦးသောင်းထိုက်+ဒေါ်စိန်ရီ 29 Nov( နေ့ဆွမ်း ) 12 သိန်း
ကိုတင်မောင်စန်း+ မမြတ်သူဇာအောင် 30 Nov(အာရုံ) 1620
မဇာဇာအောင် 30 Nov(နေ့ဆွမ်း) 2640
1 ဦးချမ်းသာ +ဒေါ် သက်ဝင်း သမီး မသီရိ ပြည်စုံချမ်းသာ (ခ) မသဒါ္ဓ သွန်းဖြိုး 01 Dec(အာရုံ) 15သိန်း
မထိုက်ဝေလင်း 02 Dec(အာရုံ) 1620
Capt.Daniel 02 Dec(နေ့ဆွမ်း) 2640
မထိုက်ဝေလင်း 02 Dec (ဖျော်ရည်) 540
5 ကွယ်လွန်သူ မိဘများအားရည်စူး ၍ ဆက်ဆက်ကျော်လူ 02 Dec(နေ့ဆွမ်း) 220 2420
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်နှင့်ဦးဣန္ဒာစာရအား အမှူးထား၍ ဒေါ်ညွန့်စိန် သမီး မပဏ္ဍိတာ မဇဝနဉာဏီ မသစ္စသိဂိႍ ၤနှင့်မောင်နှမများ 06 Dec(အာရုံ) 15သိန်း
နော်ကြည်ကြည်ဝင်း 09 Dec(အာရုံ) 15သိန်း
နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှူးထား၍စက်ရုံမှူးဦးနိုင်လင်း+မယုယုခိုင် မိသားစု 10 Dec(အာရုံ) 15သိန်း
ဦးတိုးလွင်+ဒေါ်ကေသီခိုင် 14 Dec(အာရုံ) 270 12သိန်း 3သောင်း
10 ဦးဇော်မြင့်+ဒေါ်အေးအေးမြင့်သမီး မအေးချမ်းမြတ်၊ မဆုပန်ထက ်မိသားစု 23 Dec(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
မချောစုလွင် 25 Dec(အာရုံ) 1550
15 ကွယ်လွန်သူ မိဘများ ဖြစ်သော ဦးတင်နွယ် နှင့် ဒေါ် ်ခင်သိန်း ကို ရည်စူး၍ ဒေါက်တာ မြစိုးနွယ် 26 Dec(အာရုံ)
13 မမေမီမွန် မွေးနေ့အလှူ 30 Dec(နေ့ဆွမ်း) 25သိန်း
14 အိအိခိုင် 31 Dec (ဖျော်ရည်) 5သိန်း
ကိုမျိုးဝင်းရီး + မရည်မွန်သော် သမီး မေနံနက်ခင်း
သားငယ် တူးတူးမိသားစု ကောင်းမှူ့ စုပေါင်း ဆွမ်း ပဒေသာပင် 1သိန်း
စေတနာမွန် (ထိုင်ဝမ်) စုပေါင်း ဆွမ်း ပဒေသာပင်2သောင်း
နှစ် ဘက်ဘိုးဘွား မိဘများအားအမှူးထားရည်စူး၍ ဦးမြင့်ဆွေ + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း သမီး ချစ်လေး-Ma Sandra Low မိသားစု ကောင်းမှု့ စုပေါင်း ဆွမ်း ပဒေသာပင် 100
အဘိုး ဦးတင်ထွန်းအောင် + အဘွား ဒေါ်အေးငြိမ်း မိသားစု စုပေါင်း ဆွမ်း ပဒေသာပင် 500
ကိုဇော်မင်း စုပေါင်း ဆွမ်း ပဒေသာပင် 50